အကူအညီ/အခမဲ့ Video ChatConferendo
Conferendo Plus အားဝယ်သည်
Conferendo ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ ?
Conferendo အား အဘယ့်ကြောင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း(register) ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သလဲ?
ကျွန်ုပ်၏ သီးသန့်တည်ရှိမှု (privacy) ကို ကာကွယ်ပါသလား ?
Conferendo သည် အခမဲ့လား ?
ကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile အား မည်ကဲ့သို့ edit ပြုလုပ်နိုင်ပါသလဲ ?
ကိုယ်စားရုပ်ပုံ(Avatar) တစ်ခုအား မည်သို့ ပြောင်းလဲရမည်နည်း?
မိမိမသိသော လူများမှ ခေါ်ဆိုမှု (call) များအား ပိတ်ပင်တားဆီးမှု (block) ပြုလုပ်ရန် မည်သို့ ပြုလုပ်သင့်သနည်း?
တစ်စုံတစ်ယောက်က ရိုင်းပြစော်ကားမှုပြုလုပ်လာပါလျှင် ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ?
စော်ကားနှောက်ယှက်မှုအား Conferendo မှ မည်သို့ ကာကွယ်ပါသလဲ ?
ကျွန်ုပ်၏ account အား မည်သို့ ဖျက်သိမ်း ရမည်နည်း ?
Conferendo နှင့် အခက်အခဲများရှိနေပါသည်။ ဘာပြုလုပ်သင့်ပါသလဲ?
Conferendo.com Community ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ?
အဘယ်ကြောင့် Conferendo.com community ကိုဆက်သွယ်သင့်ပါသလဲ?
Conferendo.com community ကို မည်သို့ ဆက်သွယ်ရမည်နည်း။
Conferendo.com မှ မည်သို့ ထွက်ခွာရမည်နည်း။
Conferendo community သို့ အဘယ့်ကြောင့် ဆက်သွယ် မရဖြေနေပါသလဲ?
Conferendo အသုံးပြုသူ (users) များအား ဘယ်လို ရှာဖွေနိူင်ပါသလဲ?
အသုံးပြုသူများ(users)အား အဘယ်ကြောင့် ရှာဖွေ၍မရဖြစ်နေပါသလဲ?
Conferendo Payments များ
Paid service အတွက် ကျွန်တော် money ပြန်ယူလို့ ရနိုင်မလား?
ပြန်အမ်းငွေကို မည်သို့ တောင်းဆိုရမည်နည်း?
မည်သည့်အချိန်တွင် ကျွန်ုပ်၏ငွေ ပြန်လည်ရရှိမည်နည်း ?
Conferendoသည် အခြားသော ဘာသာစကားရပ်များအားဖြင့်ပါ အထောက်အကူပြု ပါသလား။?
ခေါ်ဆိုထားမှုမှတ်တမ်းများ(Call History) ကို မည်သို့ ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရမည်နည်း?
Conferendo တွင် Chat History ရှိပါသလား?
Chat History ကို မည်သို့ Clear ပြုလုပ်ရမည်နည်း ?
ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံခြင်း (Conferencing) ဆိုင်ရာမေးခွန်းများ
အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံခြင်း (Group conference) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း?
အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံခြင်း (Group conference) တစ်ခုကို မည်သို့ စနိုင်ပါသလဲ?
အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံခြင်း (Group conference) တစ်ခုတွင် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host) က ဘယ်သူလဲ ?
အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံခြင်း (Group conference) ကို မည်သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသလဲ ?
အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံခြင်း (Group conference) မှ မည်သို့ ထွက်ခွာနိုင်ပါသလဲ?
ကျွန်ုပ်သည် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host) မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ကျွန်ုပ်သည် conference ၏ ပြင်ပသို့ ရောက်ရှိနေပါသည်။ (ဥပမာ၊ connection ပြတ်တောက်သွားသည်။) ကျွန်တော် ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်ပါသ လား?
အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံခြင်း (Group conference) တစ်ကြိမ်မှာ လူဘယ် နှစ်ဦး ဝင်ရောက်နိုင်ပါသလဲ ?
User တချို့ကို အခြား users များထက် ပို၍ ကြားနိုင်ရန် ကျွန်ုပ် တခုခု ပြုလုပ်၍ ရနိုင်ပါသလား ?
Conference တခု အတွင်း channels loading ကို ဘယ်အဆင့်ထိ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသလဲ?
အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံခြင်း (Group conference) ကို မည်သို့ design ဆွဲထားပါသလဲ ?
အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံခြင်း (Group conference) ကို full screen mode ဖြင့် မြင်နိုင်ပါသလား ?
အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံခြင်း (Group conference) မှ အသုံးပြုသူများ window များ၏ order ကို ပြောင်းလဲ နိုင်ပါသလား ?
ဤအရာသည် ပို၍ကောင်းသော online communication အတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ သင့်အား နေရာ ဒေသ အသီးသီးမှ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း အသစ်များနှင့် တွေကဆုံမှု အခွင့်အရေးသည် သင်၏ ဆက်သွယ်မှု အရည်အသွေးရော အရေအတွက်ပါ တိုးတက်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။
Conferendo သည် သင်၏ desktop သို့မဟုတ် laptop အား video conferencing station သို့ ရောက်ရှိစေမည့် ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းသော အခမဲ့ application software ဖြစ်ပါသည်။ လျှင်မြန်သော download နှင့် ပြုလုပ်ပြီးနောက် ၊ ရေမြေတောတောင် သမုဒ္ဒရာများကို ဖြတ်ကျော်၍ လူများ သင့်ရှေ့မှာရောက်ရှိနေသကဲ့သို့ မြင်တွေ့ကြားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Conferendoသည် သင် အမြဲတန်းလိုအပ်မည့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်၍ သင်၏ bandwidth and hardware အတွက် လိုအပ်ချက်နည်းစေမည့် video conferencing modes အမျိုးမျိုးကို ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။ သင်၏ phone ၌ပင် Conferendo ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ !
Notification နှင့် issue resolution အတွက် အသုံးပြုသူများ(users) များအား ဆက်သွယ်ရန် VZO chat သည် သက်တူရွယ်တူ အဆင့်အတန်းတူသူများ ဆက်သွယ်မည့် network မဟုတ်ပါ။ အမှန်စင်စစ်အားဖြင့် ၊ Conferendo severs များသည် internet မှတစ်ဆင့် အရည်အသွေးမြင့် ဝန်ဆောင်မှုများပေးမည့် အကျိုးဆောင် network ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Member များ၏ သီးသန့်တည်ရှိမှု (privacy) အား ကျွန်ုပ်တို့၏ အရေးကြီးသော values တန်ဖိုးထားမှုများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် အလေးထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးပြုသူများ(users) အား ဘယ်တော့မှ SPAN မပြုလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် member ၏ information အား ကာကွယ်ပါသည်။ သူ၏ email အား ဘယ်တော့မှ ပေါက်ကြားစေမည် မဟုတ်ပါ။
Conferendo software အား download ပြုလုပ်ခြင်း , Conferendo community အား ဆက်သွယ်ခြင်း၊ video conference types အားလုံးသို့ ပါဝင်ခြင်း၊ သုံးဦးထိပါဝင်နိုင်မည့် group ( ၃x၃) ဖန်တီးခြင်းတို့သည် လုံးဝအခမဲ့ ဖြစ်သည်။ ၆ ဦးအထိ ပါဝင်နိုင်မည့် ( ၆x၆) group video conferences နှင့် spealcers နှစ်ခုဖြင့် video broadcasts (၂x၁၂၀) ပြုလုပ်ခြင်းတို့အား $9.95 /month နှုန်းဖြင့် premium service ပေးနိုင်ပါသည်။
သင်၏ personal information အား ပြသရန် Conferendo.com အား log on (၀င်ရောက်ခြင်း) ပြုလုပ်၍ My Page ကို click ပါ။ ၎င်းနောက် page ၏ အောက်ခြေရှိ Edit Profile button ကို click ၍ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile data သို့ အလိုရှိသော ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ပါ။ သင်၏ updated profile ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား save ပြုလုပ်ရန် Save အား Click ပြုလုပ်၍ profile display screen သို့ပြန်သွားပါ
မှတ်ချက် သင်၏ email အား ပောင်းလဲမှုပြုလုပ်လျှင် ၊ ၎င်းအား နောက်တစ်ကြိမ် verify ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်လိုရာ picture တခုကိုရွေးပါ။ ဥပမာ သင်၏ ကိုယ်စားရုပ်ပုံ(Avatar) အဖြစ် ရှုခင်းပုံတစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကိုယ်စားရုပ်ပုံ(Avatar) ပြုလုပ်ရန် နည်းလမ်း ၂ ခုရှိပါသည်။ ပထမ တစ်ခုသည် Conferendo application ထဲရှိ Take picture button အား အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ camera မှ realtime snapshot အား ရယူရန် ၎င်းအား resized snapshot အား သင်၏ ကိုယ်စားရုပ်ပုံ(Avatar) အဖြစ်ပြုလုပ်ရန် Upload to my profile option ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဒုတိယနည်းလမ်းကတော့ သင်၏ Edit Profile page မှ ကိုယ်စားရုပ်ပုံ(Avatar)ကို တိုက်ရိုက် upoload ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ Uploaded picture အား 160*120 pixels သို့ resized ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက် ။	။ explicit သို့မဟုတ် adult content ကိုယ်စားရုပ်ပုံ(Avatar) များအား လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
နည်းလမ်း ( ၂ ) ခုရှိပါသည်။ ပထမခုက Conferendo application setting ရှိ သင့်တော်သော checkbox ပြုလုပ်ရန် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင်၏ Address Book မှ မဟုတ်သည့် လူများ call ခေါ်ဆိုမှုအား Block ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဒုတိယနည်းကတော့ public pages ပေါ်တွင် invisible ဖြစ်လာစေရန်နှင့် Conferendo site ၏ search results မှ ပျောက်ကွယ်ရန် Conferendo Commuity မှ ထွက်ခွာခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းအာဖြင့်၊ သင်နှင့် မသက်ဆိုင်သော pages ပေါ်၌ avatar,posts နှင့် photo ပေါ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အသုံးပြုသူများထဲမှ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်အား အဆင်မပြေမှု၊ စိတ်အနှောက်အယှက်များ ပေးပါက ကျွန်ုပ်တို့ တကယ်ပင်စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသုံးပြုသူတို့၏ စိတ်ချမ်းသာမှုကို လိုလားပါသည်။
၎င်းအား ကာကွယ်ရန် ,၎င်းစိတ်အနှောက်အယှက်ပေးသူ အသုံးပြုသူ user အား၊ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ နာမည်ပျက်စာရင်း blacklist သို့ add ပေးပါ။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် တခြားလူများအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သူအဖြစ် အမှတ်အသားပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ကြိမ်တွင် ထိုအသုံးပြုသူ user သည် သင်နှင့် တစ်ခြားလူများအား အနှောက်အယှက်ပေးနိုင်မဟုတ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
တခြား အသုံးပြုသူများ(users)ကို အနှောက်အယှက်ပေးသူများအား Conferendo မှ service နှင့် site usage အား ကန့်သတ်ပြစ်လိုက်ပါသည်။ သင့်အား တနည်းနည်းဖြင့် ကန့်သတ်ခဲ့ပါက support သို့ ဆက်သွယ်ပါ။
Edit Profile ပေါ်ရှိ delete Conferendo account link ကို click ခြင်းဖြင့် သင်၏ account ကို delete နိုင်ပါသည်။
Conferendo.com community သည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်(profiles)များ၊ news များ ၊photo များ ၊ blogs များကို အခြေခံသည့် Conferendo application အသုံးပြုသူများ၏ social networkဖြစ်သည်။	VZOchat.com community သည် သူငယ်ချင်းအသစ်များရှာဖွေရန်၊ [:vzo]call, မှတ်ချက်များ ၊ personal messages များမှတဆင့် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဆက်သွယ်ရန် ခွင့်ပြုထားပါသည် ။ သင်သည် Conferendo.com Community သို့ ဆက်သွယ်သောအခါ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile သည် အသုံးပြုသူများ၏ public lists တွင် အလိုအလျောက်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ကာ ၊ Conferendo.com Commmunity မှ တခြား အသုံးပြုသူများက ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်ကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
သင်အား သင်၏ friends မဟုတ်သူများ မမြင်တွေ့စေလိုလျှင် ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ community မှ call များအား အလိုမရှိပါက Preferences Page ပေါ်တွင် Conferendo.com Community မှ ထွက်ခွလိုက်ပါ
ဒါပေမယ့် သင်သည် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ လူများနှင့် မိတ်ဆွေဖွဲ့လိုလျှင် ဝါသနာတူများနှင့်ဆက်သွယ်လိုလျှင် ၊ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile ကို public ပြုလုပ်ပါ။ သင့်အားစောင့်မျှော်နေကြပါသည်!
Registration ပြုလုပ်ခြင်း သို့ မဟုတ် သင်၏ Per FerencesPageပေါ်တွင် Conferendo Community ကိုဆက်သွယ်နိူင်ပါသည်။
သင်၏ Email address အား အတည်ပြုခြင်း (Verify) မပြုလုပ်သေးလျင်၊ community သို့ သင်ဆက်သွယ်နိူင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြုပြီး သတိပြုစေလိုပါသည်။
Preferences Pageပေါ်တွင် Conferendo.com Community မှထွက်ခွာနိူင်ပါသည်။
Email address အား verify မပြုလုပ်သော အသုံးပြုသူများအား Conferendo.com သို့ ဆက်သွယ်ရန် ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။ကျေးဇူးပြုပြီး သင်၏ account အား အတည်ပြုခြင်း(verify) ပြုလုပ်ပါ
သင်သည် Conferendo.com Community တွင်မဟုတ်လျင် email သို့ မဟုတ် Conferendo ID အတိအကျဖြင့် သင်၏ သူငယ်ချင်းများအား ရှာဖွေနိူင်ပါသည်။
Conferendo.com Community သို့ ဆက်သွယ်လျှင် နိုင်ငံအရ လိင်အမျိုးအစားအရ၊ နာမည်အရ ၊ age အရ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ friends အသစ်များ ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Community Page ပေါ်တွင် Search form ရှိပါသည်။
Seach အားအသုံးပြုရန်၊ သင်၏ account အား အတည်ပြုခြင်း(verify) ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါမည်။ သင် account အား အတည်ပြုခြင်း(verify) ပြုလုပ်ပြီးနောက် search အား ပြုလုပ်ရန် မရပါက support သို့ ဆက်သွယ်ပါ။
Conferendo application သည် လက်ရှိအားဖြင့် အင်္ဂလိပ် ၊ ဂျာမာန် ၊ ပြင်သစ် ၊ရုရှန် ဘာသာစကား များကို အထောက်အပံ့ပေးထားပါသည်။
သင်သည် ၎င်း ဘသာစကား ( ၄ ) ခုမှ ( ၁ ) ခုအား setup setup -> languages menu အားရောက်၍ အလွယ်တကူ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ သင်သည် language ရွေးချယ်မှုကို မည်သည့်အချိန်မဆို ပြောင်းနိုင်ပါသည်။ restart ပြုလုပ်ခြင်း မလိုအပ်ဘဲ သင်၏ application အား ချက်ချင်းးပြောင်းလဲပေးပါလိမ့်မည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ယခုအချိန်တွင် call history အား ဖယ်ရှားရန်မဖြစ်နိုင်သေးပါ။ ၎င်းအား ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့။ ရှိပါသည်။ သေချာစေရန် chat history သိမ်းဆည်းမှု ကို Chat History Chaeckbox ကို enabled ပြုလုပ်ရပါမည်။ (Settings -> Preferences -> Chat) .
သင်ရှာဖွေနေသည့် သူ၏ chatwindow ကို open ပါ။ window ထိပ်ရှိ clock icon ကို click ပါ။ Chat History သည် open လာပါလိမ့်မည်။ chat history သိမ်းဆည်းမှု checkbox အား enabled ပြုလုပ်ခဲ့စဉ်မှစ၍၊ သင်နှင့် ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်၏ Chat history ကိုမြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လွယ်ပါသည်။ Right Click ပြုလုပ်၍ chat history window ထဲရှိ context menu ကို open ပါ။ Clear ကို select ပြုလုပ်ပါ။
တစ်ချိန်ထဲ အသုံးပြုသူ အမျိုးမျိုးနှင့် mutti video chat တစ်ခုကို ဖန်တီး ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဥပမာ၊ '၆x၆' mode ကို open သောအခါ ၊ လူ ၆ ဦးသည် တစ်ဥိးကို တစ်ဦး ကြားနိုင်မြင်နိုင်ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။ မိမိအပါအဝင် ကျန်လူ ၅ ဦး၏ chat များကိုမြင်နိုင်ပါသည်။ window ကို6ပိုင်းပိုင်းထားပါသည်။ အရည်အသွေး quality ကို သင်မကြိုက်လျှင် ၊ user တဦးချင်းစီ၏ sound နှင့် video ကို ပိတ်နိုင်ပါသည်။ သာမန်ထက် internet link load သည် ပိုမိုကောင်မွန်လာက ၊ overall traffic လည်း ပိုလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
Conferendo client ရှိ 'အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံခြင်း (Group conference)' button ကို click ပါ။ ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံခြင်း Conference Wizard နှင့် window တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ Wizard တွင် အသုံးပြုသူများ (users) lists ( ၂ ) ခုပါဝင်ပါသည်။ အလိုရှိသည့် type ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ဘယ်ဘက်မှ list တွင် address book contacts ပါဝင်ပါသည်။ အစပိုင်းတွင် right-hand ဘက်တွင် empty ဖြစ်နေပါမည်။ ဘက်ဘယ်ခြမ်းမှ contact ကို press လျှင် ( သို့မဟုတ် contact’s name ကို double click လျှင် ) arrow သည် ညာဘက်သို့ သွားပါမည်။ Wizard window ၏ အောက်ခြေတွင် " အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံခြင်း (Group conference) စတင်ခြင်း " button ရှိပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပြီးနောက် ညာဘက်ရှိ users list သည် သင် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း invitations များကို လက်ခံခြင်း ၊ ငြင်းပယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားပါလိမ့်မည်။
အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံခြင်း (Group conference) ကို စတင်သူသည် ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံမှု(conference) ကြာရှည်နေသ၍ ၎င်း conference ၏ " ;master" ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host)ဖြစ်နေပါမည်။ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host) က conference မှ ထွက်လိုက်လျှင် ၊ conference သည်ပြီးဆုံးကာ ၊ ပါဝင်သူများသည်လည်း အဆက်အသွယ် ပျက်တောက်သွားပါမည်။
သင်ပြုလုပ်သမျှ အားလုံးသည် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host) ကို contact ဖြစ်နေပါသည်။ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host) က သဘောတူလျှင် သင်သည် ဝင်ရောက်သွားပါသည်။
မူလ video chat မှ ထွက်ခွာသည့် နည်းလမ်းအတိုင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ 'red tube' button ကို press လိုက်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ ၊ conference သည် over မဖြစ်သေးလျှင် (ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host) သည် မထွက်ခွာသေးလျှင် )နေရာလွတ်များ ရှိနေပါသေးသည်။ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ(host) အား call ပြီး ပြန်လည်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
၂x၁၂၀ mode ကို အသုံးပြုကာ လူပေါင်း ၁၂၀ ထိ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ ၎င်း mode တွင် လူ ၂ ဦး ကိုသာ မြင်ရကာ ၊ ကျန် active users များသည် စောင့်ကြည့်သူများဖြစ်ပါမည်။ ၆x၆ mode တွင် သင်၏ coference ကို user ၅ ဦး အထိ ဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါသည်။ video windows ၆ ခုကို မြင်ရမည်ဖြစ်ကာ ၊ တစ်ဦးကို တစ်ဦး မြင်နိုင်ကြားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူများ(users) တစ်ဦးခြင်းစီ၏ sound volume ကို adjust ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သင်၏ mouse ကို user's window ကို point ၍ menu မှ Volume level ကို select လုပ်ပါ။ ၎င်းသည် သင်၏ PC အတွက်သာ ဖြစ်ပြီး တခြားအသုံးပြုသူများ(users) များကို affect မဖြစ်နိုင်ပါ။
Incoming traffic သည် သင်မြင်နေသည့် အသုံးပြုသူများ ချိူးအတိုင်း ကြီးထွားလာမည် ဖြစ်သည်။သင်သည် လူ ၃ ဦးနှင့် chat နေပါက သင်၏ traffic သည် ရိုးရိုး video call နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၃ ဆဖြစ်သည်။outgoing traffic သည် ပုံမှန်အတိုင်း ကျန်ရှိနေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ sever မှ conference ကို support လုပ်ထားပါသည်။ conference ကာလအတွင်း သင့်ကို sever နှင့် ဆက်သွယ်ထားပါသည်။၎င်းသည် traffic ကို ပိုအကျိူးရှိရှိ အသုံးချနိုင်ခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းဖြစ်ပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့ ၊ 'Full Screen' button ကို click လိုက်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ ၊ သင်အလိုရှိနေသည့် နေရာသို့ window ကို drag and drop (ဆွဲယူ၍ချ)လိုက်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့။ service အတွက် သင်ပေးခဲ့သည်ကို cancel ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ payment ပြုလုပ်ပြီးနောက် [:MoneyBack Days] အတွင်း အအမ်းပြန်လည်တောင်းခံနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မေးမြန်းခြင်းမရှိဘဲ သင့် အတွက် အအမ်းငွေ ထုတ်ပေးပါလိမ့်မည်။
သင်၏ ငွေအား ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်အမ်းမည်ဖြစ်သည်။ ပြန်အမ်းငွေအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ commission မှာ ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ သင်၏ payment ပေးချေစဉ်က amount အတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။
သက်သေပြရန်လိုအပ်သော်လည်း ၊7ရက်ကျော်လွန်ပြီးနော်က သင် ကျွန်ုပ်တို့အား အအမ်းငွေအတွက် မေးမြန်းနိုင်ပါသေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပေးထားသည့် paid services တစ်ခုခြင်းစီအတွက် အအမ်းငွေ တစ်ကြိမ်သာတောင်းခံလေးရှိ ပါမည်။ မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုမထားသော accountsများအတွက် ပြန်အမ်းမည်မဟုတ်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ payments history page ကို open ၍ သင် cancel ပြုလုပ်ချင်သည့် service အောက်ရှိ Cancel and refund link ကို click ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးလေ့ရှိသည့် payment system သို့ ပြန်အမ်းငွေတောင်းဆိုမှုကို ချက်ချင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။ များသောအားဖြင့် သင်၏ account ထဲသို့ ပြန်လည်ပေးချေရန် 30 ရက်ထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါသ်ည်။
© 2013-2022 အခမဲ့ Video Chat Conferendo! ရပိုင်ခွင့်၊ အခွင့်အရေးအားလုံးကို သီးသန့်ထားရှိပါသည်။
ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် အမှားတွေ့ရှိသည်။ အကြောင်းကြားရန် ၊၎င်းအား mouse ဖြင့် select လုပ်ကာ Ctrl+Enter နှိပ်ပါ။
အသုံးပြုမှုစည်းကမ်းများ | Privacy ဖော်ပြချက် | ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ပါ။